ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်း ၊ ကန်တော်ကြီးတာဝါ
09 458887973, 09 422888892, 09 458887973
Ad Number S-10041047
Gonyi Residence Room For Sale
ရန်ကုန်မြို့အချက်အချာကျ Downtown Area&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;...
3,650 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10034648
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် အချက်အချာကျ နေရာကောင်း Gonyi Resid...
3,787 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10023536
(1580-sqft)အကျယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်၊ Kan Thar Yar Condo, ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ အသင့်နေထိုင်နိုင်သော၊...
တည်နေရာ - Kan Thar Yar Condo, မင်္ဂလာတောင်ည...
09-252588440 / 09-252588441 / 01-9557042
Ad Number S-9999969
09458887973, 09 422888892, 09 458887973
Ad Number S-10041084
မဂၤလာေတာင္ညြန့္၊ကန္ေတာ္ျကီးအနီး၊တုိက္ခန္း၊အေရာင္း။09 444 33 77 03
Ad Number S-10040014
☃️☃️ #မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် နေရာကောင်း ရပ်ကွက်သန့်လမ်းသန့် တိုက်ခန်းကျယ် ရောင်းရန်...
Ad Number S-10035214
425 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10034193
Ad Number S-10026953
Stadium View Condoတွင် အခန်းရောင်းရန်ရှိသည်
Ad Number S-10026365
#မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်တွင် ပြင်ဆင်ပြီး အသင့်နေထိုင်နိုင်သော အိပ်ခန်း(၂)ခန်းပါသော ပထမထပ်...
Ad Number S-10017331